चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटिन््! – PathivaraOnline
Home > समाचार > चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटिन््!
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । नेकपा फुटको अवस्थामा पुगेको समयमा राजदूत यान्छी प्रचण्डलाई भेट्‍न ललितपुरस्थित प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेकी हुन् ।उनीहरुबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो ।
उनीहरुबीच बिहीबार बिहान ९:२५ बजेदेखि ९:५० बजेसम्म भेट भएको थियो । नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले महासचिव चयन गर्ने भएका छन् । यसअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा संसद्‌ विघटनका विषयमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहको बिहीबारको बैठकले महासचिव चयन गर्ने बताइएको छ । महासचिव चयन गर्ने क्रममा तीन नेताहरु प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनालबीच विवाद सिर्जना भएको छ । तीनैजनाले आफ्नो मान्छेलाई महासचिव बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
महासचिवका लागि प्रचण्ड समूहबाट जनार्दन शर्मा, माधव नेपाल समूहबाट भेदुराम भुसाल र झलनाथ समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारेका छन् । राजदूत यान्छीले उनीहरुबीचको नेपाल-प्रचण्ड समूहबीचको विवाद समाधानका विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । स्रोत हाम्रोमत